November 2021 – " कञ्चनजंगा News "
सोमवार काठमाडौ विमानस्थलमा भएको त्यो घटना…
No Comments on सोमवार काठमाडौ विमानस्थलमा भएको त्यो घटना…
काठमाडौ । काठमाडौ स्थित विमानस्थलमा निकै ठूलो घटना भएको छ । विमानस्थल भन्सार कर्मचारीले निकै ठूलो परिमाणमा सुन बरामद गरेका छन् । विदेशबाट फर्किनेहरूले ल्याएको बाला आकारको २१ किलो सुन बरामद भएको हो । सोमबार खाडी मुलुकबाट फर्किनेहरूले बाला बनाएर लगाएर ल्याएको २१ किलो सुन विमानस्थल भन्सार कार्यालयका कर्मचारीले बरामद गरेका हुन् ।
काँचो सुनलाई बाला बनाएर लगाएर आएका ४ सय १५ जनाको साथबाट २१ किलो सुन बरामद गरिएको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार प्रशासक महेश भट्टराईले जानकारी दिएका छन् । भन्सार कर्मचारीले उनीहरुलाई भन्सार तिराएर सुन भने फिर्ता दिएका छन् । काँचो सुन भएकाले भन्सार तिराएर सुन फिर्ता दिएको कर्मचारीले बताए । बरामद भएको मध्य १ सय ९५ जनाले राजस्व तिरेर आफ्नो सुन लगेको भट्टराईले जानकारी दिए ।
यसअघि बाला आकारको सुन भन्सार छुटमा ल्याउन दिइएको थियो । तर ब्यापारी र सुन त स्क र हरुले यसैवाट फाइदा लिन थाले पछि विमानस्थलले कडाई सुरु गरेको छ । अहिले विमानस्थल भन्सार कार्यालयले भन्सार महसुल लिन थालेको छ । विदेशबाट फर्किनेहरूलाई सुन त स्क रहरूले भरियाको रूपमा प्रयोग गरेर काँचो सुन पठाउन थालेको देखिएको छ । ५० ग्रामसम्मको गहनामा भन्सार शुल्क लाग्दैन । ५० ग्रामभन्दा माथि थप २ सय ग्रामसम्म भन्सार महसुल तिरेर गहना ल्याउन पाइन्छ ।
No Comments on विश्व चकित पर्ने खबर बाहिरियो, वैज्ञानिकले बनाए सन्तान जन्माउन सक्ने रोबोट
No Comments on नेपाली अभिनेत्री सुष्माले नोरा फतेही र दिशा पाटनीलाई टक्कर दिइन् [५ तस्विर]
हेर्नुस् श्रीमान विदेशमा हुँदा जेठाजुसंग सुतेर बच्चा जन्माइन्,अहिले यस्तो सहमति गरेपछि गाउँ नै छक्क पर्यो (भिडियो हेर्नुस्)
No Comments on हेर्नुस् श्रीमान विदेशमा हुँदा जेठाजुसंग सुतेर बच्चा जन्माइन्,अहिले यस्तो सहमति गरेपछि गाउँ नै छक्क पर्यो (भिडियो हेर्नुस्)
संखुवासभा जिलाको सिलचुङ गाउपालिका ३ घर भएका नवराज राई ३ वर्ष देखि वैदेशिक रोजगारीको शिलशिलामा बिदेश मै रहेका छन । तर उनकी श्रीमतिले भने यता बच्चा जन्माईन । श्रीमान बिदेशमै रहेको बेला बच्चा जन्मिने भए पछि उनी साउन महिना तिरै संखुवासभा छोडेर काठमाडौ बस्दै आएकी छिन ।
अहिले भने बच्चा जन्मी सकिएको छ । आफ्नै जेठाजुसगँ आफुले बिबाह गरेको र यो बच्चा पनि उसैको भएको नवराजकि श्रीमतिले बताएकी छिन ।
तर जेठाजी बिरेन्द्र भने उक्त कुरा अस्विकार गरिरहेका छन । आफुले शारीरिक सम्बन्ध नै नराखेको उनले अडान लिदै आएका छन ।
आफूले गल्ती नगरेको कुरा आफू नस्विकार्ने पनि बिरेन्द्र बताउँछन । गल्ती गरेको भए सजाय भोग्न तयार भएको उनी बताउँछन । तर ति बुहारिका आफन्तले भने बिरेन्द्रले फोनमा आफुहरुलाई त्यो बच्चा आफ्नै भएको भनी स्विकार गरेको बताउँछन । साथै उनी काठमाडौ आउने पनि फोनमा बताएको तर पैसा छैन भन्दै ढिला गरे पछि आफुहरु पैसा पठाइदिन तयार भएको उनिहरु बताउँछन ।
तर केही दिन पछि पैसा पठाइदिने भन्दा पनि आउन नमानेको र त्यो बच्चा आफ्नो नभएको भन्दै आफुहरुलाई अपशब्द बोलेको उनिहरु बताउँछन । आफुहरुले डि एन ए चेक आफै गराउने भनेर बोलाउँदा पनि न आएको उनिहरुको भनाई छ । तर बिरेन्द्र भने त्यो बच्चा आफ्नो नभएको र आफू डि एन ए चेक गर्न तयार रहेको बताउने गरेका छन । नवराजले भने श्रीमतिले अर्कैको बच्चा जन्माएकोले अब आफू स्विकार नगर्ने बताए । उनले न स्विकारे पछि आफ्नो बिचल्नी भएको र बिरेन्द्रले स्विकार्नु पर्ने नवराजको श्रीमतिको भनाई छ ।
संखुवासभा मै हुदा शारीरिक सम्बन्ध भएको ती बुहारिले बताईन । तर कुन महिना भएको भन्ने कुरा भने उनले खुलाउन सकिनन म धेरै पटक भएकोले कुन बेला गर्भ बसेको हो आफुलाई त्यो थाहा नभएको ती बुहारीको भनाई छ ।
तर उता जेठाजु बिरेन्द्रले भने आफुहरुको शारीरिक सम्बन्ध कहिल्यै पनि नभएको भन्दै आफुलाई झुटो आरोप लगाएर फसाउँन खोजिएको बताउदै आएका छन । आफुहरुको फोनमा भने बुहारिले फोन गर्ने गरेकोले कुरा भएको बताए । बेलुका ७/८ बजे तिर मोबाइलको चार्जर लिन बिरेन्द्रकोमा जादाँ संखुवासभाकै घरमा शारीरिक सम्बन्ध भएको बुहारिले बताएकि छिन ।
अन्त्यमा भने उनिहरुबिच सहमती भएको छ । दुबै जनाका आफ्ना आफन्तहरुकी उपस्थितिमा उनिहरु सगै बस्ने सहमती गराइएको छ ।
बिरेन्द्रले अब बुहारी स्विकार गर्ने सहमती भएको छ । उनिहरुका आफन्तले आफुहरु प्रहरिमा गएर कुनै लफडा गर्न नचाहेकोले बिरेन्द्रले दुबैलाई मिलाएर राख्नु पर्ने उनिहरुले बताए । प्रहरीमा गए बिरेन्द्र पने जेल जाने र दुबै श्रीमती र छोराछोरीको बिचल्नी हुने भन्दै आफुहरुले बाहिर नै मिलाएर उनिहरुलाई पठाउने सहमती गरेको आफन्तहरुले बताए ।
गगन थापाले भने रे पुन्य गौतम बाहेक म सँग कसैले वा,दविवाद गर्न सक्दैन, पुन्यले खुलाए आफु चुनाव ल,ड्ने जित्ने अनि मन्त्री हुने सुत्र (भिडियो सहित)
No Comments on गगन थापाले भने रे पुन्य गौतम बाहेक म सँग कसैले वा,दविवाद गर्न सक्दैन, पुन्यले खुलाए आफु चुनाव ल,ड्ने जित्ने अनि मन्त्री हुने सुत्र (भिडियो सहित)
सामाजिक सन्जालमा व्यस्थ अनि चर्चित पुन्य गौतमले एक वि,वादित आफ्नो तर्क राखेका छन । उनले भनेका छन यो चुनावमा यस्तै हो भने नेपाली काँग्रेसले चुनाव नजित्ने भावना व्यक्त गरेका छन । अझ पुन्यले गगन थापालाई भने ” मैले सुनेको छु गगन थापाले भन्नु भएको रे म सँग वा,दविवाद गर्न सक्ने भनेको पुन्य गौतम मात्र हो”।
गगन थापा ति नै नेता हुन जसको जन्म २०३३ सालमा काठमाडौँमा भएको हो । गगनको बाल्यकालका केही समय सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा बित्यो । उनि २०४६ सालको जनआ,न्दोलनमा गगन स,क्रिय भए,त्यतिबेला उनी कक्षा ९ मा पढ्थे तर राजनीतिमा लाग्ने सोचाइ थिएन । समाजशास्त्र तथा मानवशास्त्रमा स्नातकोत्तर अध्ययन गरेका थापाले २०५९ साल देखि २०६१ सालसम्म नेविसंघको महामन्त्री भएर काम गरे । भिडियो हेरौ
No Comments on ओलीसंग हारेका भिम रावल पनि भए बिजयी
नेकपा एमालेको अध्यक्षमा पराजित भीम रावलले केन्द्रीय सदस्यमा ९०४ मत प्राप्त गरेका । उनले विजेता केन्द्रीय सदस्यहरुले प्राप्त गरेको मतभन्दा निकै कम मत प्राप्त गरेका छन् । एमाले निर्वाचन कमिटीका संयोजक विजय सुब्बाले रावल निर्वाचित भएको जानकारी दिएका थिए । तर, उनको निकै कम मतका बाबजुद निर्वाचित भएको सुनाउँदा त्रुटी देखिएको छ । जबकि ९०५ मत ल्याउने टंक कार्की पराजित भएको उनले पछि बताए ।
सुरुमा टंक कार्की विजयी भनेका उनले उक्त स्थानमा सूर्य ढुंगेल निर्वाचित भएको सुनाए । रावलले अध्यक्षमा २२३ मत प्राप्त गरेका थिए । अध्यक्षमा विजयी केपी शर्मा ओलीले १८४० मत प्राप्त गरेका थिए ।
तर विजयी भएका भीम रावलले शपथ ग्रहण गरेनन् । एमाले विधान अनुसार केन्द्रीय पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य दुवैमा उम्मेदवारी दिन मिल्ने व्यवस्था छ । सोही अनुरूप नेता रावल अध्यक्षमा हारे पनि केन्द्रीय सदस्यमा विजयी थिए ।
एमाले निर्वाचन समितिका संयोजक विजय सुब्बाले रावलको नाम केन्द्रीय कमिटी सदस्यमा पढेका थिए । तर, रावलले केन्द्रीय कमिटीमा नबस्ने जानकारी दिएका छन् ।
उनले अध्यक्ष पदमा पराजित भएमा आफू केन्द्रीय सदस्यमा नबस्ने बताएका दिए । विधान अनुसार निर्वाचन समितिले उनको उम्मेदवारी स्वतः केन्द्रीय सदस्यमा पनि राखेको थियो । तर, रावले आफूले उम्मेदवारी नदिएको पदमा पनि राखेको भन्दै दिउँसो आपत्ति जनाएका थिए ।
No Comments on धर्म परिवर्तन गराएको अभियोगमा पास्टर केशवराज आचार्यलाइ २ बर्ष जेल
काठमाडौं । डोल्पामा धर्म परिवर्तन गराएको अभियोगमा अदालतले एक जनालाई २ वर्ष कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिवानाको सजाय सुनाएको छ । जिल्ला न्यायाधीश केशवराज चपाईंको इजलासले पास्टर केशवराज आचार्यले डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका–२ का महिलालाई ज’ब’र्ज’स्ती ध’र्म परिवर्तन गराएको ठहर गर्दै २ वर्ष कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको हो ।
गत वर्ष आचार्यले बिरामी भएका दुई महिलाको उपचार गर्ने भन्दै ‘प्रभु येशुको नाममा हटिजा’ भनेको र ती महिलाहरुको फोटो भिडियो खिचेर प्रचार प्रसार गरेको भन्दै जिल्ला अदालत डोल्पामा मुद्दा परेको थियो । उनलाई मुलुकी फौ’जदारी सं’हि’ताको दफा १५८ को उपदफा १, २ र ३ अनुसार अदालतले सजाय सुनाएको हो।
केहि समय अघि पनि यशुका अनुयायी बने भाइरसले छुँदैन भन्दै भ्रम फैलाउने पास्टर पक्राउ थिए। जुम्ला घर भइ पोखरा महानगरको वडा नम्बर २९ पावर हाउस बस्दै आएका केशवराज आचार्यलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो।
आचार्यले फुकेरै मन्त्र र रूमालबाट पायल्सबाट निको बनाइदिने प्रवचन दिंदै गर्दै हिड्ने गर्थे। अहिले संक्रमणको संन्त्रासमा आचार्यले यशुको अनुयायीलाई भाइरसले नछुने प्रवचन दिएका थिए । आचार्य प्रशस्त कटनी मण्डलीका पास्टर हुन् ।
No Comments on पाथिभरा माताले सबैको मनोकामना पुरा गरुन, मंसिर १५ गते बुधबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
आज श्री शाके १९४३ बि.स.२०७८ साल मंसिर १५ गते बुधबार इश्वी सन २०२१ डिसेम्बर १ तारीख मार्गशीर्ष कृष्णपक्ष द्वादशी तिथी चित्रा नक्षत्र सौभाग्य योग कौलव करण चन्द्रमा तुला राशिमा आनन्दादि योगमा काल योग राक्षसनाम संवत्सर सुर्य दक्षिणाय हेमन्त ऋतु विश्व एड्स दिवस (ज्यो.प.सरोज घिमिरे)
यहि हो नेपाली कांग्रेसको चुनाब चिन्हमा भएको सक्कली रुख, जुन रुखको फेदमा बसेर ‘बीपीले…
No Comments on यहि हो नेपाली कांग्रेसको चुनाब चिन्हमा भएको सक्कली रुख, जुन रुखको फेदमा बसेर ‘बीपीले…
काठमाडौ। अर्थशास्त्रका प्राध्यापक तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सुरेन्द्र लाभले मंगलबार राति फेसबुकमा एउटा तस्बिर साझा गरे। तस्बिरमा फेद नजिकैबाटै हाँगा फैलिएर छहारी दिने बडेमानको रुख देखिन्छ।
उनका अनुसार झण्डै दुई सय वर्ष पुरानो यो रुख सिरहा जिल्लाको औरही गाउँपालिका–५ डा. राजेशचन्द्र दासको प्रांगणमा छ। लाभले त्यो भालसरीको रुख भएको उल्लेख गरेका छन्। भालसरी सदाबहार रुख हो, जुन दक्षिण एसिया, दक्षिण–पूर्वी एसिया र उत्तरी अस्ट्रेलियामा पाइन्छ।
यसको काठ मूल्यवान् मानिन्छ। भालसरीको फल खान सकिन्छ भने पारम्परिक औषधिका रुपमा पनि यसको प्रयोग हुने गर्छ। यसको फूल सेतो र फल पँहेलो हुन्छ। तर, यो रुखको परिचय यतिमै सीमित छैन। स्थानीय बासिन्दा नेपालको पुरानो राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेसको चुनाव चिह्न यही रुखबाट प्रेरित भएको ठान्छन्।
जुन चुनाव चिह्न कांग्रेसले वि.सं. २०१५ देखि हालसम्मका निर्वाचनमा प्रयोग गर्दै आएको छ। नेपालको राजनीतिमा कांग्रेस भनेको रुख र रुख भनेको कांग्रेस भन्ने मान्यता नै स्थापित छ। प्राध्यापक लाभले कांग्रेसको चुनाव चिह्न डा. दासको औरहीस्थित घरको प्रांगणमा अवस्थित भालसरीको रुखबाट प्रेरित रहेको दाबी गरेका छन्।
‘यो सिरहा जिल्लाको औरही पालिका अन्तर्गत डा. राजेशचन्द्र दासजीको प्रांगणमा रहेको भालसरीको लगभग दुई सय वर्ष पुरानो रुख हो,’ उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘पारिवारिक सूत्रअनुसार नेपाली कांग्रेसको रुख चिह्न यसै रुखबाट प्रेरित छ।’
जनकपुरको जानकी मेडिकल कलेजमा कार्यरत डा. दास आफ्नो घरको प्रांगणमा रहेको यही रुख हेरेर नै कांग्रेसले २०१५ सालमा पार्टीको चुनाव चिह्न बनाइएको दाबी गर्छन्। ‘हाम्रै आँगनछेउमा रहेको त्यही रुख हेरेर कांग्रेसका संस्थापक नेताहरुले पार्टीको चुनाव चिह्न बनाएको सुनेको हुँ, ’उनले भने, ‘रुखको फोटो र चुनाव चिह्न हेर्नोस् न, समान छ।’
सिरहाबाट कांग्रेसका समानुपातिक सांसद पद्मनारायण चौधरी पनि यो भनाइमा सहमत छन्। त्यही भालसरीको रुखको फेदमा बसेर कांग्रेसका संस्थापक नेताहरुले चुनाव चिह्नको परिकल्पना गरेको उनको भनाइ छ। ‘दास परिवारको घरअगाडि पोखरीको डिलमा भालसरीको रुख छ।
त्यही रुखको फेदमा बसेर पार्टीको चुनाव चिह्न परिकल्पना गरेर अगाडि बढाइएको सुनेको हुँ,’ सांसद चौधरीले भने। कांग्रेसका तर्फबाट २०७२ सालमा उपराष्ट्रपतिका उम्मेदवार संविधानसभा सदस्य अमियकुमार यादवले पनि दास परिवारको घरको प्रांगणमा रहेको भालसरीको रुखबाट नै चुनाव चिह्न बनाइएको दाबी गरे।
‘नेपाली कांग्रेसका लागि औरही ऐतिहासिक ठाउँ हो। कांग्रेसका संस्थापक सदस्यहरु देवनाथजी र सूर्यनाथजीको घर अगाडि विशाल रुख छ,’ ७६ वर्षीय यादवले नेपालखबरसँग भने, ‘त्यही तल बसेर बीपी बाबुहरुले चुनाव चिह्न कल्पना गर्नुभएको थियो।’
उनले त्यसबेला दास परिवारको घरमा कांग्रेसका संस्थापक नेता बीपी कोइरालाको आउजाउ बाक्लै रुपमा आफूले देखेको समेत जानकारी दिए। ‘उहाँहरु (दासबन्धु) पनि नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेतामै पर्नुहुन्छ। उहाँहरुको घरमा बीपी बाबु जानुहुन्थ्यो, ’उनले भने, ‘हामी सानै थियौँ।
विद्यार्थी जीवनमा मैले पनि बीपी बाबुसँग संगत गरेको थिएँ।’ यादव नेपालमा प्रजातन्त्र बहालीपछि सिरहाका पहिलो निर्वाचित सभापति हुन्। उनी राष्ट्रिय सभा सदस्य, संविधान सभा सदस्य हुँदै उपराष्ट्रपति पदमा नन्दबहादुर पुनसँग कांग्रेसका तर्फबाट चुनावी मैदानमा उत्रिएका थिए।
‘नेपाली कांग्रेसको इतिहासको प्रारुप’ नामक पुस्तकका लेखक पुरुषोत्तम बस्नेतचाहिँ कांग्रेसको चुनाव चिह्न सो भालसरीको रुखबाट प्रेरित नभएको दाबी गर्छन्। कांग्रेसको चुनाव चिह्न र अर्थशास्त्रका प्राध्यापक लाभले सामाजिक सञ्जालमा राखेको रुखको तस्बिरबारे नेपालखबरले राखेको जिज्ञासामा उनले भने, ‘होइन, त्यो होइन।
२०१५ सालमा पहिलो निर्वाचन हुने भयो। चुनाव चिह्न छान्न बोलाइयो। पार्टी आफैँले केही चुनाव चिह्नमध्ये रुख छानेको हो।’ तर, गत फागुन १० गते पार्टी कामको सिलसिलामा सिरहा पुगेका कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल भने कांग्रेसको चुनाव चिह्न परिकल्पना गरिएको रुख औरहीमा रहेको भन्दै उक्त ठाउँमा पुगे।
त्यो ठाउँमा पुगेर उनले भालसरीको रुख पछाडि पर्ने गरी तस्बिरसमेत खिचाए। पौडेलको तस्बिर मोबाइलको क्यामेरामा कैद गरेका नेपाल प्रेस युनियनका सचिव खिला कार्की भन्छन्, ‘केपी ओलीले पहिलो पटक विघटन गरेको संसद पुनःस्थापना भएको अघिल्लो दिन हामी सिरहामा थियौं।
वरिष्ठ नेताले औरहीमा चुनाव चिह्न कल्पना गरिएको रुख छ भन्ने सुनेको स्थानीय नेतालाई सुनाउनुभयो। पछि हामीहरु त्यहाँ पुग्यौं।’उनका अनुसार नेता पौडेल आफैँले स्थानीय नेताहरुले संस्थापक नेताहरु बीपी कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गणेशमान सिंहलगायतका नेताहरु औरहीको एक रुखको फेदमा बसेर चुनाव चिह्न परिकल्पना गरेको प्रसंग निकालेका थिए।
एमाले अध्यक्षमा पुन ओली : ओलीलाई १९०० मत रावलको पक्षमा १९६ मत
No Comments on एमाले अध्यक्षमा पुन ओली : ओलीलाई १९०० मत रावलको पक्षमा १९६ मत
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)को अध्यक्षमा पुनः केपी शर्मा ओली निर्वाचित भएका छन् । चितवनको सौराहामा भएको १०औं महाधिवेशन अन्तर्गत नेतृत्व चयनका लागि मंगलबार भएको मतदानमा प्रतिस्पर्धी डा भीम रावललाई भारी मतान्तरले हराउँदै अध्यक्षमा पुनः ओली निर्वाचित भएका हुन् ।
एमाले केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका अनुसार खसेको २ हजार ९६ मतमध्ये ओलीले १९०० मत र भीम रावलले १९६ मत प्राप्त गरेका छन् । आज (मंगलबार) विहान ४ बजेदेखि सुरु भएको मतदान साढे ११ बजे सकिएको थियो । जहाँ २ हजार १५३ मतदातामध्ये २ हजार १९६ मत खसेको थियो ।
त्यसोत, एमाले नेता विष्णु रिजालले यस अगाडि नै १०औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको पहिलो बैठक र शपथ ग्रहण सौराहामा नै हुने जानकारी गराएका छन् ।